Ellicott® Dredges Ampiasaina amin'ny fanadiovana amin'ny fambolena herinaratra Kingston any Tennessee
Desambra 16, 2009
Source: Engineering New Record (ENR)
Misy lahatsoratra iray vao haingana izay navoaka tamin'ny famoahana desambra Engineering New Record (ENR) tamin'ny volana Desambra, izay manasongadina ireo fanamby atrehin'ny Tennessee Valley Authority (TVA) amin'ny Fambolena Kingston Power akaikin'ny Emory River, Tennessee, Etazonia.
Ny TVA dia herintaona izao amin'ny tetik'asa efa ho $ 1 miliara dolara efa namboarina ho fanadiovana taorian'ny fipoahan'ny lavenona tamin'ny Desambra 2008.
Mampiasa ny andiam-paritr'i Ellicott ny tontolo iainana sy ny tontolo iainana sy ny tontolo iainana Sevenson ao Niagara Falls, New York® Dredges suction fanapahana marika sy paompy booster hanatanterahana ny asany. Ny dredges dia miasa 24 ora isan'andro, 6 andro isan-kerinandro.
Araka ny voalazan'ilay lahatsoratra, ny maso ivoho amerikanina miaro ny tontolo iainana (EPA) dia nanao fanamarihana tsara momba ny fanadiovana ary nanamarika fa, "… manao« mahery »ny ekipa fa tsy misy akony amin'ny tontolo iainana.”
Nalaina avy tamin'ny: Lahatsoratra ENR mitondra ny lohateny hoe, “Mialà amin'ny fikorontanana goavambe sy lavenona…”
Manomboka tetikady momba ny tontolo iainana miaraka amin'ny Ellicott